Jarmalka: Merkel oo markii 4aad la doortay iyo Xisbiga midigta Fog AFD oo guulo gaaray – Kasmo Newspaper
Jarmalka: Merkel oo markii 4aad la doortay iyo Xisbiga midigta Fog AFD oo guulo gaaray
Updated - September 24, 2017 8:50 pm GMT
London (Kasmo), Saacadihii la soo dhaafay waxaa soo dhammaaday wakhtigii codeynta doorashooyinkii guud ee maanta looga dareeray dalka Jarmalka, iyada oo, sidii la filayay guushii raacday Xisbiyada Isbahaysiga talada haya.
Xisbiyada Cdu (Christian Democratic Union) ee Anjela Merkel iyo bahwadaaggeeda Csu (Christian Social Union) ayaa si wadajir ah u helay 34,7% codadkii la dhiibtay maanta oo Axad ah.
Taas oo ka hooseysa 8 dhibcood doorashadii hore ee 2013kii, laakiin ugu filan Angela Merkel, oo 63 jir ah, xafiiskana joogtay 12 sano, in ay mar 4aad Ra’iisal Wasaare ka noqoto Jarmalka.
Xubnaha kale ee muhiimka ah tartankana kula jiray waxaa ka mid ah 62 jirka Xisbiga Spd ee Social Democrat-ka, Martin Schulz (21,6%), kaas oo in ka badan 20 sano Xildhibaan ka soo ahaa Barlamaanka Yurub ee Strasbourg.
Angela Merkel oo ka soo jeedda Jarmalkii Bari waxay marar badan u meerisay siyaasadda Midowga Yurub, waxayna dhexdhexaadisay mashkilado badan oo Caalami ah. Sannadkii 2016kii, wargayska “Forbes” ee arrimaha dhaqaalaha ka faallooda, wuxuu ku sifeeyay in ay tahay haweeneyda ugu awoodda badan iyo shakhsiga 3aad ee Dunida, Vladimir Putin iyo Donald Trump ka dib.
Waxa qur ah ee doorashooyinka ku cusub waa Xisbiga midigta fog AfD (Alternative Fur Deutschland) oo guulo kooban gaaray, 13,3,%, galayana kaalinta 3aad, isaga oo markii u horreysay taariikhda ka mid noqonaya Barlamaanka. Dhibta ugu weyn ayaa hadda wuxuu ka taagnaan doonaa habkii xukuumadda loo dhisi lahaa oo isbahaysiyada loogu kala habayn lahaa iyada oo barbar-dhac uu ka jiro axsaabta yaryar.
Dariiqyada suuragalka ah waxay noqon karaan ilaa 3:Isbahaysiga buuran “Grosse Koalition” dhexmara, markii 3aad, CDU-SPA, sidii sannadadii 2009kii iyo 2013kii dhacday, amase mid lagu magacaabay “Jamaica” midabka calammada dartood, oo xisbiyada Cdu-Fdp (Liberalka) iyo Cagaarka.
Midka 3aad, Merkel qudheeda ayaa meesha ka saartay, waana xukuumad ka kooban xisbigeeda Cdu oo markaas noqonaysa mid laga tira badanyahay.
In kasta oo natiijadu buurnayn, 2da xisbi ee hadda Xukuumaddu ka koobantahay, Cdu iyo Spa, waxay wali haystaan, haddii ay isu geeyaan xooggooda, aqlabiyadda Barlamaanka, 399 ka mid ah 631ka kursi, laakiin Xisbiga Spa waxaa laga yaabaa in uusan oggolaan oo mucarad isu baddelo.